Yinto Yonke Into Okufuneka Uyiqonde NgoBurtezomib (179324-69-7) | AASraw
Yinto Yonke Into Okufuneka Uyiqonde NgoBurtezomib
/Blog/Bortezomib/Yinto Yonke Into Okufuneka Uyiqonde NgoBurtezomib
ezaposwa ngomhla 06 / 27 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Bortezomib.
2.Iyiphi i-bortezomib isetyenziselwa?
3. Bortezomib Isisombululo
4.Usebenzisa njani i-Bortezomib?
5. Ngaba i-Bortezomib i-chemo?
6.Ziziphi iimiphumo zomphumo ze-bortezomib
7. Ziziphi izicwangciso ezizodwa omele ulandele ngaphambi kokusebenzisa i-bortezomib?
Bortezomib powder ividiyo
I.Bortezomib powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-Bortezomib powder
I-molecular Formula: C19H25BN4O4
Isisindo somzimba: 384.24
1. Yintoni iBortezomib?
I-Bortezomib powder i-179324-69-7, eyayibizwa ngokuba yi-PS-341, isetyenziswe njengegama elithi "Velcade" kwimarike. liyi-anti-cancer drug and first antibiotic proteasome inhibitor ukuze ihlolwe ngabantu. Ii-proteasomes ziyi-complex complexes eziphula amaprotheni. Kwezinye i-cancer, ii-proteins eziqhelekileyo zokubulala iiseli zomhlaza ziyaqhekeka ngokukhawuleza. I-Bortezomib powder iphazamisa le nkqubo kwaye ivumela ezo proteins zibulale amaseli omhlaza. I-athomu ye-boron ngaphakathi kwe-bortezomib powder i-catalytically ibopha indawo esebenzayo ye-26S proteasome ngokubambisana kakhulu kunye nokucacisa, oko kubangele ukuba kubanjwe umjikelo wamaseli kunye ne-apoptosis. Kwiiseli eziqhelekileyo, i-proteasome ibandakanyeka ekuthotshweni kweeprotheyini ezinobuninzi ezibekwe uphawu lokutshatyalaliswa ngenxa yokuba zonakaliswe okanye zingenakunyulwa yiseli. Nangona kunjalo, kwiiseli zomhlaza, umsebenzi weproteasome uhlaziya iiproto-propytotic ezifana ne-p53 ebenokubangela ukuba ukufa kweeseli ezicwangcisiweyo zenzeke. Ngokukodwa, i-arhente inqanda into yenyukliya (i-NF) -kappaB, iprotheni eyenziwa ngokusebenzayo kwezinye iisomdlavuza, ngaloo ndlela iphazamise ukusinda kwe-cell-cell NF-kappaB, ukukhula kwe-tumor kunye ne-angiogenesis. Ku-vivo, i-bortezomib powder ilibazisa ukukhula kwe-tumor kwaye iphakamisa imiphumo ye-cytotoxic ye-radiation kunye ne-chemotherapy.
I-Bortezomib powder i-179324-69-7 ivunyelwe e-US ngokunyanga i-myeloma kunye ne-vestima ye-slim cell lymphoma. Kwi-myeloma eninzi, iimpendulo zeekliniki ezipheleleyo zifunyenwe kwizigulane ezinezinye izikhumbuza okanye izifo eziqhubekayo ngokukhawuleza. I-Bortezomib powder ingasetyenziselwa ukuphatha ezinye iintlobo zomhlaza njengengxenye yolu vavanyo lophando.
Igama Product: I-Bortezomib powder
Umzimba: I-soluble kwi-chloroform, i-dimethyl sulfoxide, i-ethanol
Ifomu Yomzimba: solid
Iingxelo: I-COA, i-HPLC, i-HNMR
Intengo yeBortezomib: Qhagamshelana nathi
Umvelisi weVelcade: AASraw
2. Yintoni eyenziwa yi-bortezomib?
I-Bortezomib i-powder cas egxina i-179324-69-7 ngumhlaza wekhemotherapy isifo somhlaza esisetyenziselwa ukunyanga iintlobo ezithile zeemvumi, Ikhusela amaprotheni athile anceda ekunciphiseni ukukhula nokusabalala komhlaza.
Unyango lwama-myeloma amaninzi (uhlobo lomdlavuza wethambo lomongo).
Ukunyangwa kwe-vestima ye-slim cell lymphoma (umhlaza okhula ngokukhawuleza oqala kwiiseli zamasosha omzimba) osuke unyangwa ngamanye amayeza.
Ngamanye amaxesha unokunikezwa emva kweminye imishanguzo yomhlaza iye yazama ngaphandle kokunyanga impumelelo, ncokola nodokotela.
Phawula: Ukuba isicatshulwa siphunyelelwe ukuba sisetyenziswe enye, oogqirha banokukhetha ukuba basebenzise le nkunkuma kwezinye iingxaki ukuba bakholelwa ukuba kunokuba luncedo.
I-Bortezomib powder I-179324-69-7 ifakwe kwi-vein nge-IV: 3.5mg /
I-Adult Dose yokunyanga kweLymphoma
I-DOSAGE NGOKUPHELEKILEYO NGAPHANDLE KUNYE UMTHETHO WOKUPHILA LYMPHOMA:
1.3 mg / m2 njenge isitofu IV bolus kabini ngeveki kunye IV rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, kunye prednisone ngomlomo iiveki ezimbini (iintsuku 1, 4, 8, kunye 11) ilandelwe yi ngemini ezilishumi ixesha lokuphumla (iintsuku 12 nge 21 ) U
Ixesha leveki ezintathu libhekwa njengomjikelezo wonyango.
-Iiyure ze-72 iiyure kufuneka zidlulele phakathi kwamanani alandelelanayo we-bortezomib.
-Izigulane ezineempendulo zokuqala ezibhalwe kumjikelezo we-6, izijikelezo ezimbini ezongezelelweyo (i-cycluted total of 8) ziyacetyiswa.
UKUSETYENZISWA KWEBHUNGELO LOKUBHALWA KWE-MANTLE CELL LYMPHOMA:
ithamo -Usual: 1.3 mg / m2 njenge isitofu bolus IV okanye kwesikhumba kabini ngeveki iiveki ezimbini (iintsuku 1, 4, 8, kunye 11) ilandelwe yi ngemini ezilishumi ixesha lokuphumla (iintsuku 12 nge 21). Therapy uqhebeke ngaphaya 8 imijikelo ukuze uqhutywe ngaba ucwangciso standard okanye anikwe kanye ngeveki iiveki 4 (iintsuku 1, 8, 15, kunye 22), ilandelwe yi luphumlo-ngosuku 13 (iintsuku 23 nge 35).
I-Adult Dose yokunyangwa kwe-Multiel Myeloma
UKUSETYENZISWA KWEBHAYIBHILE KWENKQUBO YOKUPHATHA KWI-MYELOMA:
ithamo -Usual: mg 1.3 / m2 elawulwa njenge 3 ukuba 5 isitofu bolus IV yesibini okanye kwesikhumba xa zidityaniswe ne melphalan yomlomo prednisone yomlomo ukuba alithoba 6-veki imijikelo unyango:
imijikelo -ukuze 1 nge 4, bortezomib ilawulwa kabini ngeveki (iintsuku 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, kunye 32). Ngemijikelezo ye-5 nge-9, i-bortezomib ilawulwa kanye ngeveki (iintsuku 1, 8, 22, kunye ne-29).
- Ubuncinci iiyure ze-72 kufuneka ziwele phakathi kokulandelelana i-bortezomib.
UKUSETYENZISWA KWEBHAYIBHILE KWENKQUBO EYI-MELIPLE I-MYELOMA:
ithamo -Usual: 1.3 mg / m2 njenge bolus inaliti efakwa okanye kwesikhumba kabini ngeveki iiveki ezimbini (iintsuku 1, 4, 8, kunye 11) ilandelwe yi ngemini ezilishumi ixesha lokuphumla (iintsuku 12 nge 21). Ulwaphulo olwandisa ngaphaya kwemijikelezo ye-8 lunokulawulwa kwishedyuli efanelekileyo okanye lunikelwa kanye ngeveki kwii4 iiveki (iintsuku 1, 8, 15, kunye ne-22), ilandelwe ukuphumla kwe-13 ngosuku (iintsuku 23 nge-35).
-Bortezomib velcade inokulawulwa yedwa okanye idibanethasone.
-Izigulane ezine-myeloma ezininzi eziye zaphendula unyango kunye ne-bortezomib (nokuba yedwa okanye idibaniselwano) kwaye abaye baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde bahlaziywe emva kweenyanga ezingama-6.
4. Indlela yokusebenzisa i-Bortezomib?
I-Bortezomib velcade i-179324-69-7 inikezelwa ngumjovo kwi-vein okanye phantsi kwesikhumba ngumntu onobugcisa bezempilo. Ukuba ufumana i-Bortezomib velcade phantsi kwesikhumba, qiniseka ukuba isayithi le-Bortezomib litshintshile rhoqo ixesha lokunciphisa ubunzima phantsi kwesikhumba. Okucetyiswayo i-bortezomib injection dosage ihluka ngohlobo lomzimba. Ijojowe emthanjeni (ngaphakathi) okanye phantsi kwesikhumba (ngaphantsi), ngokuqhelekileyo injected kanye okanye kabini ngeveki, ngamaxesha athile ahlukeneyo, kuxhomekeke kwimeko ephathwayo. Kufuneka kubekho ubuncinci beeyure ze-72 phakathi kweqondo ngalinye le-Bortezomib velcade i-179324-69-7. Ihedyuli ejikelezayo ingalandelwa ukuya kwiijikelezo ezisibhozo. Kubalulekile ukusela amanzi amaninzi ngelixa uphathwa ngayo nale nkunkuma ukukhusela ukuba unxweme. Emva koko, ugqirha wakho unokugqiba isigqibo sokuqhubeka unyango lwakho, kodwa uya kufumana iBergosomib velcade kaninzi. Qiniseka ukuxelela ugqirha wakho indlela oziva ngayo ngexesha lonyango lwakho. Ugqirha wakho unokuyeka unyango ixesha okanye ukunciphisa umthamo wakho we-Bortezomib velcade ukuba ufumana imiphumo emibi yeyeza. kwaye ubonane nogqirha wakho okanye ukhemisti ukuba unemibuzo.
Bortezomib velcade kufuneka igcinwe kwiqondo lokushisa lokushisa elikhuselekile ekukhanyeni, kwaye ligcinwe ngaphandle kokufikelela kwabantwana. Emva kokuxuba, isisombululo singagcinwa kwiiyure ze-8 kwindawo yokushisa. Musa ukulahla amayeza emanzini amdaka (umz. Ngaphantsi komquba okanye kwindlu yangasese) okanye kwidaka yamakhaya. Buza wakho umephemisti ukuba ulahla njani amayeza angasadingeki okanye aphelelwe yisikhathi.
I-Bortezomib powder ifowuni 179324-69-7 luhlobo lwe-chemotherapy olubizwa ngokuba lonyango olujoliswe kuyo. Ivunyiwe yi-FDA yokunyanga i-myeloma kunye ne-vestima cell lymphoma eklasini yamayeza ebizwa ngokuba yi-proteasome inhibitors. I-Bortezomib powder iye yafundiswa kwizilingo ezibalulekileyo zeeklinikhi. Ukususela ekuvunyweni kwayo, i-Bortezomib powder isetyenziselwe ukuphatha izigulane eziqikelelweyo ze-550,000 * emhlabeni jikelele. Kuye kwafundiswa kwiindawo ezahlukeneyo zabantu, kubandakanywa nalabo abanokukhubazeka kwe-renal kunye nesifo sikashukela.
6. Ziziphi iimiphumo zomphumo ze-bortezomib?
Ukuthintela intsebenziswano engxaki phakathi kwe powderomib powder kunye nezinye iziyobisi, qi niseka ukuba uxelele ugqirha wakho ukuba unamayeza nawaphi na amayeza, kwaye yiyiphi enye imithi kunye nezongezelelo ozithathayo ngoku. Kumele uxelele ugqirha wakho ukuba unayo okanye unesifo sesibindi, isifo sesibindi, okanye isifo sesifo, ukuba ukhulelwe okanye uceba ukukhulelwa, okanye ukuba uncelisa. I-Bortezomib powder akufanele ithathwe ngexesha lokuncelisa
Ezi ziphumo zecandelo ezilandelayo ziqhelekileyo xa zithatha powderomib powder I-179324-69-7:
Ukuphefumula okubhaliweyo, ubuthathaka obunzima;
Ukuvutha, ukukhenkceza, ukugubungela, ukuphazamisa, ukukhahlela, "izikhonkwane kunye neenaliti", okanye iintlungu ezitshisa ezandleni okanye ezinyaweni;
Intlungu yesisu, ithambo okanye intlungu;
I-peripheral neuropathy: ebonakaliswe ngentsingiselo yokunciphisa kunye ne-paresthesia (ukugubha kunye nokubetha kwezandla kunye neenyawo). Kungase kube nokunyuka kwesifo se-preexisting neuropathy. Ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha idosi yakho okanye ishedyuli ye-bortezomib. Iimpawu zingaphucula okanye zibuyele kwisiseko kwezinye izigulane xa i-bortezomib ishiyiwe.
Ukuxakeka, ukungena entloko, ukukhanya okukhawuleza xa ukhupha ngokukhawuleza ukusuka kwindawo yokulala okanye indawo yokuhlala, Ukulahleka kwesidlo,
Isifo sohudo, ukubethelwa, ukubhubhisa;
Ukwandisa izinga lentliziyo
Imfiva, ukubola, iimpawu ezibandayo okanye izifo;
I-blisters ebuhlungu kwi-trunk yomzimba
Izilonda, izilonda, okanye amabala amhlophe emlonyeni
Iingxaki zokulala (ukulala)
Ubuthathaka kwiingalo, izandla, imilenze, okanye iinyawo
Ukuhluthwa okubuhlungu okanye okunzima, Ukunciphisa umchamo, Igazi kumchamo okanye izitishi,
Rash okanye itching, okanye ukucaphuka kwesikhumba apho iyeza lijojowe.
Ikhumba elisiko, ukululaza okanye ukuphaphaza; Inani elisezantsi leplatelet. (Oku kunokukubeka engozini yokunyuka kwamanzi.) (Nadir: iintsuku ze-11)
Inani elibomvu lamaseli egazi (iAnemia).
Ezi ziphumo ziphumo aqhelekanga nemiphumo emibi xa uthatha powderomib powder I-179324-69-7:
Usulelo oluphezulu lokuphefumula
ukwandisa uvakalelo ekuthinteni
ukuvuvukala ubuso, iminwe, iinyawo, okanye imilenze ephantsi
ukubetha ezandleni nasezinyaweni
Ukuvuvukala ubuso, izandla, iinyawo okanye imilenze (i-edema).
Inani elisezantsi legazi lamhlophe. (Oku kunokubeka ingozi enkulu kwintsholongwane.)
Ukuhlolwa kwegazi kakubi: (i-sodium ephansi, i-magnesium ephansi, i-calcium ephantsi, i-potassium ephantsi).
Azikho zonke iziphumo ezichaphazelekayo ezibhalwe ngasentla, Biza ugqirha wakho kwiingcebiso zonyango malunga nemiphumo emibi. Ungabika iziphumo ezimbi kwi-FDA kwi-1-800-FDA-1088.
Gwema ukusondela kubantu abagulayo okanye abanezentsholongwane. Tshela ugqirha wakho kanye xa uhlakulela iimpawu zentsholongwane.
xelele ugqirha wakho kunye nomboneleli wezempilo ukuba unobungozi bortezomib velcade I-179324-69-7, i-mannitol, nayiphina imithi, okanye i-boron.
xelela ugqirha wakho ukuba wena okanye nabani na ohlala kwintsapho yakho uye wakha wafumana isifo senhliziyo kwaye ukuba uke wafumana isifo sobungozi be-herpes (izilonda ezibandayo, izibonda okanye izilonda zomzimba); iswekile; kutyhafa; i-cholesterol ephezulu (amafutha egazini); uxinzelelo lwegazi oluphantsi okanye oluphezulu; ingxaki ye-neuropathy (ingqungquthela, intlungu, ukubetha, okanye ukuvutha komsindo ezinyaweni okanye ezandleni) okanye ubuthathaka okanye ukulahleka kwintliziyo okanye ukuxiliswa kwinto ethile yomzimba wakho okanye isifo okanye isifo sesibindi. Kwakhona xelela ugqirha wakho ukuba utshaya okanye uphuze utywala obukhulu.
xelele ugqirha wakho ngezinto eziphathekayo ezithathayo, ingakumbi i-wort yaseYohane.
xelela ugqirha wakho kunye nekhemistiya ukuba yintoni enye imithi yokugaya imithi kunye nokungabhaliswanga, iivithamini, okanye izongezelelo zondlo ozithathayo okanye ucwangcise ukuthatha. Qinisekisa ukukhankanya naluphi na oku kulandelayo: i-amiodarone (iCordarone, iPacerone); cimetidine (Tagamet); i-clarithromycin (i-Biaxin, i-Prevpac); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, abanye); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); i-fluvoxamine; izibilini ezithile ezifana ne-itraconazole (i-Sporanox) okanye i-ketoconazole (i-Nizoral); amayeza ukunyanga isifo sikashukela okanye uxinzelelo lwegazi; amayeza athile ekuphatheni intsholongwane ye-immunodeficiency virus (HIV) okanye i-immunodeficiency syndrome (i-AIDS) njenge-indinavir (Crixivan), i-nelfinavir (iViracept), okanye i-ritonavir (Norvir); amayeza athile okunyanga i-carbamazepine (iCarbatrol, iTegretol), i-phenobarbital (iLuminal, i-Solfoton), okanye i-phenytoin (i-Dilantin, iPhenytek); i-mibefradil (ayisekho kwi-US); nefazodone; rifabutin (i-Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rifamate, Rimactane, nabanye); i-troleandomycin (TAO) (ayisekho kwi-US); okanye i-verapamil (Calan, Covera, Isoptin, eTarka, nabanye). Ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha amanyathelo akho amayeza okanye ukubeka iliso ngononophelo kwimiphumo emibi.
xelela ugqirha ukuba ukhulelwe okanye uceba ukukhulelwa. bortezomib velcade inokulimaza umntwana. Sebenzisa ulawulo lokuzalwa ukukhusela ukukhulelwa ngexesha lonyango kunye ne-bortezomib cas 179324-69-7. Buza ugqirha wakho ukuba unemibuzo malunga neendlela zokulawulwa kokuzalwa eza kusebenza kuwe. Ukuba ukhulelwe ngelixa usebenzisa i-bortezomib velcade biza ugqirha wakho ngokukhawuleza.
ungasondli ngexesha lokunyanga bortezomib velcade. Emva kokuba unyango lwakho lugqibile, xela ugqirha okanye umongikazi malunga nokukhuseleka kokuqala ukunyusa.
Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na utshintsho kwisimo sakho sengqondo, umbono owehliweyo, okanye iingxaki zokuthetha okanye ukuhamba. Ezi zimpawu zingaqala ngokuthe ngcembe kwaye zihambe ngokukhawuleza.
I-Bortezomib velcade inokubangela imbono ephazamisayo kwaye inokuphazamisa ukucinga okanye ukuphendula kwakho. Qaphela ukuba uqhuba okanye wenze nayiphi na into efuna ukuba uqaphele kwaye ukwazi ukubona ngokucacileyo.
Ukuba utyunjwa, kuquka ukuhlinzwa kwamazinyo, xelela udokotela okanye wamazinyo ukuba usebenzisa i-bortezomib velcade.
Gwema ukuba unxweme xa unokuhlanza okanye urhudo. Iimpawu zokungcoliswa kwamanzi ziquka ukungcola, umlomo owomileyo, ukuphelelwa amandla, okanye isikhumba eshushu nesomileyo. Thetha nogqirha wakho malunga nendlela engcono yokuzigcina u-hydrated.
Musa ukufumana naluphi na uhlobo lokugonywa okanye ugonywa ngaphandle kokuba ugqirha lwakho luvunywe ngelixa uthabatha i-bortezomib velcade i-179324-69-7.
I-Bortezomib velcade inokunciphisa iiseli zegazi ezenza umzimba wakho ulwe nezifo kwaye uncede igazi lakho livale. Igazi lakho liya kufuneka lihlolwe rhoqo. Ukunyanga kwakho komhlaza kunokulibaziseka ngokusekelwe kwiziphumo zale mvavanyo.
Xhumana nomniki-nkonzo wakho wezempilo ngokukhawuleza imini okanye ubusuku ukuba ufanele ufumane nayiphi na impawu elandelayo ngezantsi:
Umlilo we-100.4 ° F (38 ° C) okanye ngaphezulu, ama-chill (iimpawu ezinokwenzeka zentsholongwane)
Ukuphefumla okufutshane, ukuphefumula, ukuphefumula ubunzima, ukuvala umqala, ukuvuvukala kwimizimba ebusweni, imisipha (indlela enokwenzeka ngayo inkunkuma).
Ezi zimpawu zilandelayo zifuna unyango, kodwa alukho imeko engxamisekileyo. Xhumana nomniki-nkonzo wakho wempilo kwiiyure ze-24 zokuphawula nayiphi na elandelayo:
Ukuhlambalaza (ukuhlanza ngaphezulu kwexesha le-4-5 kwixesha le-24 ngeyure).
I-nausea (iphazamise ukukwazi ukutya nokungaxhaswanga ngamayeza anqunyiwe).
Iimpawu zentsholongwane ezinjengobomvu okanye ukuvuvukala, intlungu ngokugwinya, ukukhwehlela inqabileyo, okanye ubuhlungu
Ukuphaphaza ngokwemvelo okanye ukutyumla
I-diarrhea (i-4-6 iziqephu kwithuba leyure le-24).
Ukutyunjwa akuphelelwanga nokusetyenziswa kwelaxative.
Amnyama okanye ama-tarry esitishi, okanye igazi kwiindawo zakho.
Iimpawu ezintsha okanye ezidlulayo ze-peripheral neuropathy.
Ukuvuvukala, ubomvu kunye / okanye intlungu emlenzeni omnye okanye ingalo kwaye ayikho enye.
Ukuvuvuka kweenyawo okanye iinyawo. Ukufumana ubunzima obunokukhawuleza.
Ukukhathala okukhulu (ukukwazi ukuqhuba imisebenzi yokuzinakekela).
ukuhluma.Awukwazi ukutya okanye ukusela kwiiyure ze-24 okanye unemiqondiso yokudakalisa amanzi: ukhathala, ukoma, umlomo owomileyo, umnyama kunye nokunciphisa umthamo, okanye utywala.
Njalo xelela umboneleli wakho wezempilo xa ufumana iimpawu ezingavamile.
tags: I-Bortezomib powder, uthenge i-Bortezomib powder
I-Hydralazine HCL (304-20-1) isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu	Ubuninzi beDoogestrel Ukuthengiswa: IziPhononongo kunye neNqanaba kunye nemiphumo